Diniho ny Antony Anarahanao ny Dian’i Jesosy (Jaona 6)
HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA | JAONA 5-6
Diniho ny Antony Anarahanao ny Dian’i Jesosy
Nilaza fanoharana sarotra be i Jesosy indray mandeha. Tafintohina ny mpianany sasany, ka tsy nanaraka azy intsony. Vao iray andro talohan’io anefa i Jesosy no nanao fahagagana, mba hanomezana sakafo ho azy ireo. Hita tamin’izany hoe nahazo hery avy amin’Andriamanitra izy. Nahoana àry ireo mpianatra ireo no tafintohina? Satria tia tena izy ireo. Fitadiavana tombontsoa fotsiny no niarahany tamin’i Jesosy.
Tsara àry isika tsirairay raha misaintsaina hoe: ‘Inona no tena mahatonga ahy hanara-dia an’i Jesosy? Noho ny fitahiana azoko amin’izao sy ho azoko amin’ny hoavy ve? Sa noho izaho tia an’i Jehovah sy te hampifaly azy?’
Nahoana isika no mety ho tafintohina raha ireto no tena antony anompoantsika an’i Jehovah?
Tiantsika ny miaraka amin’ny mpiara-manompo
Te hiaina ao amin’ny Paradisa isika